Izingxenyekazi eziyi-10 zokufunda ukwenza uhlelo | Kusuka kuLinux
Ngidlulisa amehlo ngithole lezi zixhumanisi, zimayelana nohlelo, ngenkathi ngifunda, ngafika ezindaweni ezithile lapho babalula khona ukufunda okungabonakali, engangikuthola kuthakazelisa kakhulu.
1 2. Zama uRuby
2 3. Ukwabelana ngamakhono
3 4. Uhlelo
4 5. Iqembu leThimba Lesihlahla
5 6. Ikhodi Yesikole
6 7. IKhan Academy
7 8. UHackasaurus
8 9. IStanford University
9 10. IP2P University
2. Zama uRuby
Ngicabanga ukuthi ngiqinisile uma ngithi umphakathi wakwaRuby unezifundo zokufunda ezihle kakhulu futhi ezimnandi kunazo zonke. Isibonelo abadumile Hack Hack nabangokomoya Ruby koans. Ngokwengxenye yayo, i-Try Ruby iyisifundo esisebenzisanayo, esicishe sifane nendaba ehlelwe, ekumema ukuthi uthole lolu limi oluhle. Bengingeke ngicabange ngakho futhi kunganginikeza ithuba lokufunda uRuby ngokushesha okukhulu.
"Funda noma yini kunoma ngubani, noma kuphi." Lesi isithembiso seplatifomu exhumanisa inethiwekhi yezindawo zothisha / zabafundi, abantu abafunda futhi bafundise nohlelo ngokusebenzisa izifundo lapho ukufunda kuqondiswa khona ngumphakathi.
Hlela njengamanje, iJava, i-PHP, i-C ++, iPython nezinye izilimi zokuhlela kusiphequluli sakho, ngaphansi kwemigomo emithathu eyisisekelo: funda, ikhodi bese wabelana. I-interface ayisiyona enhle kunazo zonke, noma kunjalo ngokwemigomo yesakhiwo isebenza kahle. Izinselelo zakho zokuhlela zingumbono omuhle kakhulu.
5. Ithimba Lezindlu
Ngaphansi kwesiqubulo esithi "Ufuna ukufunda ini namuhla?", ITeam Tree House inikezela ngezifundo eziku-inthanethi, ezisuselwa kumavidiyo amafushane, achazwe kahle futhi alandelana, ezinhlelweni zewebhu nakuhlelo lwamaselula iOS. Kuyadingeka ukuthi ukhokhe okubhaliselwe ukufinyelela kuzo zonke izinto, ezivuselelwa futhi zikhule njalo. Ngiyathanda ukuthi bagqoka imihlobiso nokuthi bayizinkomba zemfundo engaphezulu kweziqu zasekolishi.
6. Ikhodi Yesikole
"Funda ngokwenza" kungxenyekazi esekelwa yi-IBM, Github, AT & T, egcwele izifundo eziku-inthanethi, nazo ezibheke ukukhuliswa Wezemfundo. Idizayini enhle yesiza. Ifanele i-athikili ehlukile yokuxoxa ngekusasa lohlelo lokufundisa.
Le nkundla yi-YouTube yemfundo eku-inthanethi, igcwele ngamavidiyo amakilasi wokufaka amakhodi agcwele nezinye izihloko eziningi. Yize iqiniso lokuthi uma kuqhathaniswa namanye amapulatifomu iKhan Academy ibukeka ingeyendabuko, iqiniso ukuthi liyasebenza (ngisho nakumaselula).
IMozilla ihlala ikhathazekile ngemfundo kuyo yonke iwebhu evulekile, isuselwa emazingeni, nesiphequluli njengelebhu yemibono ephekwe nge-HTML5. IHackasaurus yimizamo ekhangayo yokuyisa lokhu kufunda kwelinye izinga, cishe kulelo lamabhulokhi eLego, lapho izinhlelo zakha khona, zixubana, zizama: isenzo sobuciko ngokuphelele.
9. I-Stanford University
Ngefomu lapha kukhona kuphela amavidiyo nezethulo zendabuko. Kepha ekujuleni kwenhliziyo sinemizamo emikhulu yezifundo evela kosolwazi baseStanford University ukuletha ngokungaguquguquki lokho abanye abakubona kuyisifundo esihle kakhulu sohlelo lokusebenza lwe-iOS kuwebhu. Uhlobo olukhulu njenge Yebo kobuhlakani bokufakelwa uNorvig noTrun abunikeze ngasekupheleni konyaka owedlule.
10. IP2P University
Bonke othisha, bonke abafundi: imfundo ye-P2P, phakathi kwabalinganayo. Imfundo yokubambisana, eyakhiwe yimiphakathi eshisekayo, enomoya womthombo ovulekile namasiko akhululekile. Njengomqondo kuyamangalisa; njengokuqaliswa kuguquka njalo, kungokwemvelo kakhulu. Lapha uzothola izifundo ezinhle kakhulu zokuhlela, ezinye ngezindikimba ezingajwayelekile, kepha konke kuyathakazelisa.
Uyawazi amanye amapulatifomu afanayo? NgeSpanishi? (IsiNgisi asingeni nakimi ngemithambo)
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Amapulatifomu we-10 wokufunda ukwenza uhlelo
eyodwa futhi kusho
Kuhle lolu hlu, bengazi iningi kakhulu…. kodwa-ke kukhona iphutha, inkambo yokuzama i-ruby ingenye yalezo ezinikezwa esikoleni samakhodi, empeleni eyokuqala:
Phendula kokunye futhi
Bengazi iCodeacademy kuphela. Siyabonga ngokuhlanganisa u-Alf.
Sawubona, ngiyazi ukuthi lokhu akuyona iposi elungile kepha bengifuna ukubuza umbono wakho ngeCrunchBang
tammuz, esithangamini http://foro.desdelinux.net/ Kunemibono ngayo, ngoba angiyisebenzisi, angikwazi ukukutshela.
Okunye futhi, ngiyabonga ngokuphawula, ngoba angazi ngale ndaba futhi ngifuna ukufunda kimi bekukhona izinto ezi-2 ezihlukile.
Ngiyabonga kakhulu Alf, lesi sifinyeto samapulatifomu sihle kimi ngoba ngifuna ukusebenzisa isikhathi sami samahhala ehlobo ukuhlela izinto ezithile ezincane ebenginazo engqondweni!
Kukhona nabantu abavela kwizikole ze-w3sc zeWebhu.
Umnikelo omuhle Alf !!
Lapho ngangivele ngilingeka ukuthi ngizame uRuby on Rails !!
Ngiyazithanda lezi zihloko ngohlelo.
Kuhle, kusuka lapha bengazi iCodecademy kuphela, umnikelo omuhle kakhulu !!
Okungangisiza kimi kungaba uhlu lwama-IDE, ikakhulukazi iPython, akunjalo? Haha
Ukubona ukuthi bayakukhonza yini http://python.org.ar/pyar/IDEs
Noma lokhu http://www.google.com.mx/#hl=es-419&sclient=psy-ab&q=entorno+de+programacion+integrado+para+python&oq=entorno+de+programacion+integrado+para+python&gs_l=hp.3…1609.12522.0.12812.45.26.0.19.19.0.236.3374.4j21j1.26.0…0.0…1c.pnTYs1oUJpQ&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=6ec16ffdd78162f&biw=1169&bih=660
Eqinisweni, nge-synaptic ngabhala i-python, futhi yanginika phakathi kwazo zonke izinketho, "IDE python" ngezinguqulo ezi-2.
woow lokhu okuhle!
Ngingathanda ukufaka iVelneo (http://velneo.esKulula kepha kunamandla.
I-100% ngeSpanishi, iyi-multiplatform, isebenzela ifu noma eyasendaweni, inezifanekiso zohlelo lokusebenza lomthombo ovulekile ongazisebenzisa ngokukhululeka….
Qaphela: Yenzelwe ngokukhethekile ukudala nokusebenza kwezinhlelo zebhizinisi
I-OpenSUSE 12.2 RC iyatholakala